China okusha okungangenwa manzi nokwelukiweyo ikhethini ikhethini Ukukhiqiza futhi Factory | Isifunda
Indwangu ephothiwe ikhethini lezinyosi elingenamanzi, indwangu elukiwe ngemuva kokuqeda ukushisa okushisayo okungenamanzi, ukuthungwa okubushelelezi nokubushelelezi, ukumelana kakhulu kunendwangu ejwayelekile engcolile, okulula ukuyiphatha.
Sithuthukise inqubo yokukhiqiza yendabuko yamakhethini oju lwezinyosi, sisebenzisa indwangu ye-shuttle esikhundleni sendwangu engalukwanga njengendwangu yekhethini lezinyosi, kanye ne-pur wet esebenzayo esetshenziswayo yokuncibilika kokunamathisela esikhundleni se-polyester ejwayelekile noma i-polyamide hot melt adhesive. Lolu uhlobo olusha lwendwangu yokuvala izindwangu yekhekhe lezinyosi, enezinzuzo zokuphila isikhathi eside, kepha futhi inezinzuzo zempilo ende yokusebenza, ukumelana nokwembatha kanye nokumelana nodoti wendwangu ye-shuttle. Ngasikhathi sinye, ibuye ibe nokuthuthuka okukhulu kokuthungwa nokuthungwa.
Ukusetshenziswa kwekhethini lezinyosi lekhethini lezinyosi elisha le-Spindle Fabric Honeycomb Curtain
Ikhethini lezinyosi lezinyosi lingahlukaniswa kuvulwe ngaphezulu, ukuvulwa okuphansi, nokuvala okuphezulu nangaphansi ngokuya ngemodi yokuvula. Amakhethini angavulwa kusuka phansi kuye phezulu noma kusuka phezulu kuye phansi, futhi angahlala kunoma yisiphi isikhundla phakathi, ukufiphaza nokufakwa kokushisa uma uthanda. it Futhi ubusuku nemini ukwakheka kwamakhethini, ngokuhlanganisa izindwangu ezimbili ezahlukahlukene zokuhambisa, ukukhetha okukhululekile, ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene zemini noma zobusuku zokukhanya nobumfihlo. Ikhethini lezinyosi lezinyosi elishiwo ngenhla lingaqhutshwa nenjini encane ye-DC. Ngedivayisi yokulawula isivinini, intambo ehlanganisiwe ku-coaxial ingazungeza futhi idonse intambo yokuphakamisa iye phezulu naphansi ukufeza ukuvulwa nokuvalwa kwekhethini. Isakhiwo sayo esiyingqayizivele sedivayisi enomkhawulo senza ukucaciswa okuhlukile kwemikhiqizo kungabekwa ngokunembile phezulu naphansi, ngenkathi imoto ivinjiwe lapho ugesi unqanyulwa ngokuzenzakalela ukuze imoto ingavinjelwa.
Olandelayo: Ikhethini lezinyosi elisha elilwa nelanga futhi elingamelana nokushisa
Ikhadi Lezikhombisi Lomswakamo Lamachashaza Ayisithupha, Ukuhlola Umswakama Card, ICobalt Mahhala, Ikhadi Lokukhomba Umswakama, Ikhadi Lesikhombi Somswakama Mahhala, Ikhadi lamahhala leCobalt,